Waa maxay sababta Channel Tunnel The Sidaas Muhiim Ah Europe? | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Waa maxay sababta Channel Tunnel The Sidaas Muhiim Ah Europe?
Ma dheer ka dib Tunnel Channel sida badan tixraac sida Tunnel Eurostar furay in 1994, waxaa lagu magac daray mid ka mid ah mucjiso Toddoba ka mid ah aduunka Modern. Sida laga soo xigtay Ururka American ee Injineerro Civil, horyaalka in uu si wanaagsan u qalmay. Waxaa ka mid ah ku riday Tunnel Channel yaabab naqshadda sida State Empire ee Dhismaha iyo Tower CN.
Eurostar Tunnel The dhab ahaan waa wax yaab leh oo feat weyn ee dhismaha. Laakiin sababta ay sidaas muhiim u ah Europe? Maxay ahayd saamaynta, kaas oo magaalooyinka safra gaari karo by isticmaalkiisa? Aynu eegno dhow at the muhiimadda Channel Tunnel:
History Of Tunnel Eurostar The
Inkastoo dhismaha Tunnel Channel uu ka bilowday 1988, in macnaheedu ma aha in fikradda ahayd cusub. Xitaa Napoleon ku fashilmay in fikradda ah xira England iyo France via Teelato. oo isaga ka horreeyey, Injineer Faransiis Albert Mathieu-Favier ugu horeysay soo jeediyay tunnel noocan oo kale ah ee 1802. Uu fikrad ka mid ah jasiirad macmal ah jidka, sida faras-labiska Idaacadda. Si kastaba ha ahaatee, qorshaha ugu ayaa ka baxay ilaa ka dib dagaalkii labaad ee dunida.
In 1987, baarlamaanada ee UK iyo France isku waafaqay in la dhiso Tunnel Channel. Mashruuca ayaa waxaa ka mid ahaa dhismaha saddex sugnan - laba gaadiidka tareenada iyo mid ka mid ah sida tunnel adeeg. Horumarinta kaxaystay lix sano, $7.2 billion, kow iyo mashiinada lagu caajisaa, iyo 13,000 shaqaalaha. Its qiimaha u dhigma maanta $12 billion.
Xaqiiqada Tunnel Channel
Channel Tunnel waa 31.35 miles dheer, qaybta ah quuska ah 23.5 miles. Waa qaybta xargaha ugu ballaaran dunida oo dhan in ka waddaa 250 ft hoos badda sariirta heerkii ugu hooseeyey. Connects tunnel The Folkestone ee England la Coquelles, Pas-de-Calais ee France. Waxaa waddaa Channel Ingiriisi ah ee Strait of Dover dureeri.
Maxaa ka dhigay Tunnel Channel gaarka ah waa in ay tahay isku xira kaliya ee Great Britain iyo dhulweynaha Yurub. Oo tareenada-xawaaraha sare la heli karo maanta, waxaa mid ka mid ah siyaabaha ugu dhaqsiyaha badan ay u safraan UK in dhulweynaha Yurub.
Impact ee furan Tunnel Channel
Eurostar Tunnel ayaa door weyn ka qaataan tareenka safri heli karo mar labaad. Waxay si gaar ah u mahad UK, maadaama ay ka dhigtay in ay suurto gal u safraan Europe oo aan duulaya. Waxay ka caawisaa dadka safarka ah loo yareeyo kharashka safarka, iyo sidoo kale raadkooda kaarboonka ay. Eurostar ku qiyaastey in safarka ka London in Paris by shanqarta tareenka 90% gaaska nooluhu yar qiiqa badan qaadashada diyaarada.
Qaybta ugu wanaagsan ee ku saabsan Tunnel Channel waa ay xidhiidh la major shabakadaha tareenka Yurub. waxaa Isticmaalka, waxaad ka heli kartaa in inta badan magaalooyinka waaweyn ee Yurub ka UK. Oo aynu iloobin waxa kale oo suurtogal ah in ay gaaraan magaalooyinka waaweyn ee UK sida London aan duulaya. Waa la awoodi karo ah, degdeg ah iyo hab amaan ah ay u safraan.
London ilaa Lyon Highsped Train
Haddii Tunnel Channel aad fascinates, qaadan a kortaan dhex! safarka Ma laga yaabaa in muuqaal dabiici ah, laakiin ay racfaan been in ay sahlanaato. Haddii aad u baahan tahay inaad u safarto ama magaalo ee UK ka, jartaan tikidhka tareenka aad maanta!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/channel-tunnel-europe/- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml oo waxaad bedeli kartaa / ja si / de ama / iyo luuqado badan.
#channeltunnel #traveleurope europetravel Eurostar eurotrip London longtrainjourneys trainjourney Tranride talooyin tareenka tareen safarka Talooyin safarka tareenka travelfrance